AKHRISO: Xaaf oo Qoraal Xasaasi ah ah u diray Beesha Caalamka – Kismaayo24 News Agency
AKHRISO: Xaaf oo Qoraal Xasaasi ah ah u diray Beesha Caalamka
by admin 9th January 2020 0113
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa qoraal uu kaga cabanayo faragalin uu sheegay in dowlada federaalka ku heyso Galmudug waxa uu u diray wakiilada Beesha Caalamka .
Xaaf ayaa Warqada uu u diray Beesha Caalamka oo ku qorneyd luqada English ku sheegay in dowlada federaalka faragalin iyo qalalaase ku heyso Galmudug , waxa uu sidoo kale sheegay in dowlada ay afduubatay doorashada Galmudug.
Waxa uu sheegay Madaxweyne Xaaf in dowlada federaalka Soomaaliya geesay magaalada Dhuusomareeb ciidamo aad u badan uu sheegay in loogu tala galay cabsi galin iyo in lagu fuliyo danaha dowlada.
Qoraalka Xaaf u diray Beesha Caalamka ayuu sidoo kale ku sheegay siyaasada iyo habdhaqanka dowlada in ay abuurtay iska horkeenid iyo in la abuuro xiisado aan loo baahneyn.
Xaaf ayaa sidoo kale u cadeeyay Beesha Caalamka in uu wakaaladii kala noqday Wasaarada arimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya, waxa uuna sababta ku sheegay in beelaha qaar keeneen tabashooyin ku aadan sida dowlada ay wax u wado.
Madaxweyne Xaaf ayaa qoraalka uu u diray Beesha Caalamka ugu sheegay in uu magacaabay Guddi doorashada Galmudug qaban qaabiya ayna ka go’an tahay in uu qabto doorasho xor ah oo lawada ogol yahay.
Madaxweyne Deni oo diiday Xeer ay ansixiyeen labada Aqal ee Baarlamaanka federaalka.
TOP NEWS: Dowlada Shiinaha oo ku dhawaaqday Go’aan u Muuqda Mid ay kaga qeyb qaadaneyso Dagaalka lagula jiro Alshabaab
Tifaftiraha K24 29th November 2016
DEG DEG: Akhriso Mooshinkii laga keenay Shirka Jowhar oo 5 qodob laga soo saaray
admin 23rd April 2016
Madaxweyne Xasan iyo Madaxweyne Geele oo Gaaray Baladweyne